android ဖုန်းများအတွက် VMware က Boxer APK ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » VMware က Boxer
VMware က Boxer APK ကို
VMware က Boxer အရှိဆုံးဆန်းသစ်အီးမေးလ်, ပြက္ခဒိန်နဲ့ Android ပေါ်မရရှိနိုင်အဆက်အသွယ် app ကိုပါ! ဒီနေရာတွင်ကဆုရ app ကိုအကြောင်းကိုပြောနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုင်:
အဆိုပါ Webby ဆုတစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းလ် Productivity App ကိုများအတွက် Boxer ဆန်ခါတင်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး! *****
* "ဒီ mail ကို client ကိုအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ပြီး, အလွန်ပေါ် မူတည်. ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ " - Dave ဂျွန်ဆင်, CBS Moneywatch *****
* "အဆိုပါအမြန်ဖြေကြားမှုများတော်တော်စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ " -Mat Honan, Wired *****
ကလူကိုသင်မလိုဘဲမြင်သိကြဒါမှ * "Boxer အီးမေးလ်များကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဘို့ tools များ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအစုံရှိပါတယ်။ သင်ကအလွယ်တကူဝင်မက်ဆေ့ခ်ျ '' နှင့်တူ '' တစ်ဦးပွတ်ဆွဲနဲ့အတူမော်ကွန်းတင်ချက်ချင်းအလိုအလျောက်တုံ့ပြန်မှုပေးပို့တစ်ဦးမှလုပျစာရင်းအီးမေးလ်များကို add နှင့်နိုင်ပါတယ် တစ်ကယ့်တုံ့ပြန်မှု။ " -Thorin Klosowski, Lifehacker *****
ဂျီမေးလ်, Outlook, ချိန်း (တက် 2007 နှင့်), Yahoo, Hotmail, iCloud, & IMAP ကိုအကောင့်မရရှိနိုင်ပံ့ပိုးမှု။
• Boxer သငျသညျစမတ်အလုပ်လုပ်ကူညီပေးသည်နှင့်ပိုမြန်အမြောက်အများပြင်ဆင်ရန်တူသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အမြန်ဖြေကြားမှုများနှင့် built-in ပြက္ခဒိန်များနှင့်အဆက်အသွယ်အတူ။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုချစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်တခြား features တွေ:
•ပေါင်းချုပ် Inbox ထဲမှာ: မျိုးစုံအီးမေးလ်အကောင့် add
•စမတ် Folders: သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အဖွဲ့အစည်းအတွက်အမှုအရာ file လိုဘယ်မှာ Boxer အောက်မေ့
•ရရှိနိုင် Send: Select လုပ်ပါနှင့်အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်သင်၏ပြက္ခဒိန်ရရှိနိုင်မှုပေးပို့
•အီးမေးလ် Likes: ကိုအသုံးပြုခြင်း "လိုပဲ" လျင်မြန်စွာပေးပို့သူရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုအသိအမှတ်ပြုရန်
• Files: အားလုံးအကောင့်များမှအားကြည့်ရှုစီမံဆွဲယူတဲ့ attachment များကို
လက်ဝှေ့သမားသင်သည်ထိုသို့သောစကားပြောဆိုမှု Threading နှင့်ပိုပြီးအဖြစ် on / off features တွေဖွင့်, သင့်အကြိုက်ဆုံးအကောင့်အရောင်များကိုရွေးချယ်ဖို့စွမ်းရည်နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံး၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
•စိတ်ကြိုက်ပွတ်ဆွဲပါ: ပယ်ဖျက်ဖို့သင့်ရဲ့ပွတ်ဆွဲအမူအရာ Specify, မော်ကွန်း, စပမ် +9သည်အခြားရွေးချယ်စရာကနေရှေးခယျြဖို့
• Profile picture: သင့်အီးမေးလ်ထဲကနေသည်နှင့်ပင်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်ဓာတ်ပုံများကို personalize သူကိုကြည့်ရှုပါ
ရုံးမှာတော့သို့မဟုတ်သွားလာရင်း, အကြိုက်ဆုံးအဆက်အသွယ် marking နှင့်ညာဘက်ရဲ့ inbox အတွင်း၌သင်အကြိုက်ဆုံး productivity apps တွေနဲ့ပေါင်းစပ်, ညီလာခံခေါ်ဆိုခခေါ်ဆိုမှုများကဲ့သို့ feature များနှင့်အတူချိတ်ဆက်နှင့်ရုံးထဲက setting နေဖို့။
• Evernote ပေါင်းစည်းရေး: ရုံကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူ Evernote မှအီးမေးလ်များကိုပေးပို့ပါ
•ပြက္ခဒိန်ပေါင်းစည်းရေး: ပွတ်ဆွဲဖိတ်ကြားချက်များတွေ့ဆုံကျဆင်း / လကျခံဖို့
• Cloud ကို Attachments: အ AirWatch အကြောင်းအရာ Locker Dropbox, Box ကို, Google Drive ကိုထောက်ခံမှု & ပိုပြီး
• passcode နှင့် PIN ကို: ဒေတာသေချာစေရန်တစ်ပတ်စ်ကုတ်သို့မဟုတ် PIN နှင့်အတူသင့်အီးမေးလ် Secure လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ encrypt လုပ်ထားဖြစ်ပါသည်
VMware က Boxer
68.55 ကို MB